Goobta haweenka ee dabiiciga ah: sida laga soo xigtay Ruushka Helena Petrovena Blavatski (aka Madame Blavatski), haweenku waa dabeecadda dabiiciga ah waana dabiicadda dadka wax bara, ma aha ninka Dabeecadda ... Run ama Been?
Posted By: KongoLisolowaa: July 20, 2019 00: 40 No Comments
Naagtu waxay u janjeertaa dhageysiga dabeecadda in ka badan ninka. Waxay u egtahay dabeecado isdaba joog ah. Iyada oo iyada male-awaal ah horumarsan, iyadu waa hal talaabo ka horreysa ninka. Mustaqbalka aan aad u fog, haweeneyda ayaa hag doonta ninka.
Sep30 03: 37